Soomaali Mareykanka degan oo qaatay go’aan… | Caasimada Online
Home Warar Soomaali Mareykanka degan oo qaatay go’aan…
Soomaali Mareykanka degan oo qaatay go’aan…
Muqdisho (Caasimada Online) – Ku-dhawaad 150 Kawaanley badankooda ka soo jeeda Somalia ayaa isaga tegay Shaqadooda, kadib, markii ay is-khilaafeen Maamulka Wershada Hilibka ee The Cargill Meat Solutions oo ku taalla Degmadda Fort Morgan ee Gobalka Colorada ee dalka Maraykanka.
Tallaabadaasi ayaa timid, kadib, Maamulka Wershadda ay Muslimiinta u diideen fasax kooban si ay u oogaan Salaaddaha ku gala inta ay shaqaynayaan.
Toban maalmood ka hor, in ka badan 200 Shaqaale ay ayaa isaga tegay Shirkadda Wershadaasi, kadib, markii lagu mamnuucay inay si wadar ah hal mar u baxaan si ay Jameeco ahaan u tukadaan.
Qaar ka mid ah Shaqaalahaasi ayaa soo laabtay, balse intooda badan wey diideen inay ku laabtaan shaqada, kadib, markii ay Wakiilo ka socda Golaha Xiriirka Muslimiinta Maraykanka “The Council on American-Islamic Relations (CAIR)” dhexdhexaadin ka galeen Murankaasi.
Hawl-fuliyaha iyo Afhayeenka Golaha Islaamka Maraykanka, Jeylaani Xuseen ayaa sheegay in Shaqaalaha la ruqseeyey ay ku jiraan kuwo Wershadda ka shaqeynayey ilaa 10-sanno.
Waxa uu sheegay inay Maamulka Wershadad oggolaadeen inay Muslimiinta ku tukadaan Wershadda dhexdeeda, loona diyaariyey Qolka Salaadda.
Sidoo kale, Mas’uulkaasi waxa uu sheegay inay Shaqaalaha shaqada ka tegay sheegeen intay Salaad la’aan ku dhici lahayd iska ruqseysteen Shaqada Wershadda.
Isbuucii la soo dhaafay, Afhayeenka Wershadda Hilibka ee The Cargill Meat Solutions, Mike Martin ayaa u sheegay Wargeyska The Greeley Tribune in Shaqaalaha aaminsan Diimaha kala duwan u oggol yihiin inay cibaadaystaan, laakiinse aysan oggolaan karin inay hal mar shaqaale badan u baxaan Cibaadaysi, taasi oo uu sheegay inay yaraynayso Wax-soo-saarka Wershadda.
Dhinaca kale, Shaqaalaha Kawaanleyda ee ka shaqeeya Wershadaasi, waxaa la sheegay inay halkii saac ku shaqeeyaan lacag dhan 14-Dollar.
Xigasho: AP and The Denver Post‎